တာမွေမြို့ နယ်ရှိ သန္နိသုခကျောင်းတော်ကြီးအား အင်အားသုံး ၀င်ရောက်စီးနင်းမှု တစ်ခုဖြစ်ပွား
ယနေ. (၁၀-၆-၂၀၁၄)၊ ည(၁၁း၃၀) ခန်.တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို.နယ်ရှိ သန္နိသုခကျောင်းတော်ကြီးအား အင်အားသုံး ၀င်ရောက်စီးနင်းမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အဆိုဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပီနန်ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်တစ်ဦးအား Tomorrow မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ " ပီနန်ဆရာတော်ကြီးမှ အဆိုပါ သန္နိသုခကျောင်းတော်ကြီး မြေနေရာကို ဆရာတော်ကြီးအမည်ပေါက်ဖြင့် တပည့်ဒကာ၊ဒကာမများ စုပေါင်းအလှူငွေဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရက ဝေဖန်မှုတွေပြုတဲ့အပေါ် ဆရာတော်ကြီးကို ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတော့ပဲ အဆိုပါကျောင်းတော်ကြီးကို သိမ်းယူလိုက်ကာ နိုင်ငံတော် သံယနာယကအဖွဲ.သို.လွှဲအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး မြန်မာပြည်သို. ပြန်ကြွလာချိန်မှာ ဆရာတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သန္နိသုခကျောင်းတော်ကိုပြန်လည် သတင်းသုံးရယူခဲ့ရာ၊ နိုင်ငံတော်သံယနာယကအဖွဲ.မှ ၄င်းတို.ပိုင်ဆိုင်သည် ဟုဆိုပြီး ဆရာတော်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို သီတဂူဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်က ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ဘက်မှမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်လျက် နိုင်ငံတော်သမတထံ မေတ္တာရပ်ခံထားဆဲဖြစ်ပြီး၊ယခုအချိန်အခါ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို.ကြွရောက်နေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ.များနှင့် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ အတင်းဝင်ရောက်
သိမ်းယူနေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း " ပီနန်ဆရာတော်ကြီး၏တပည့်တစ်ဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆုိပါနေရာရှိ ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ.မှ တာဝန်ရှိသူအား မေးမြန်းခဲ့ရာ ၄င်းဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မနက်ဖြန် သာသနာရေးဝန်ကြီးသို.မေးမြန်း စေလိုပါကြောင်း၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ တောင်းခံသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ.များ လာရောက်ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။